Dagaalo culus oo Ciidanka xoogga dalka iyo Al-Shabaab ku dhex maray Marka | Jowhar Somali News Leader
Home WARARKA Dagaalo culus oo Ciidanka xoogga dalka iyo Al-Shabaab ku dhex maray Marka
Dagaalo culus oo Ciidanka xoogga dalka iyo Al-Shabaab ku dhex maray Marka
Wararka ka imaanaya magaalada Marka ee Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in dagaal culus oo u dhaxeeyay ciidamada xoogga dalka iyo Al-Shabaab uu ka dhacay xaafado duleedka ka ah magaalada Marka.
Dagaalka oo la isu adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa ka dhacay xaafadaha dhaca dhanka deegaanka Jilib Marka ee duleedka magaalada Marka.
Wararka ayaa sheegaya in Ciidamada xoogga dalka iyo kuwa AMISOM ay ku sii siqayaan jidka xeebta ee isku xira Muqdisho iyo Marka, halkaasoo ay gacanta ku hayaan Al-Shabaab.
Saraakiil ka tirsan Xoogga dalka ayaa sheegay in dagaalo goos goos ah oo ka dhacay duleedka Marka ay ku dileen dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab, ayna ku qabteen kuwa kale.
Ciidamada xoogga dalka ee uu hoggaaminayay Abaanduulihii hore Jen. Caanood ayaa qorshahooda ahaa sidii Al-Shabaab uga saari lahaayeen deegaanada xeebta ee isku xira Muqdisho iyo Marka, sida Jilib Marka iyo Gandarshe.
Magaalada Marka ayaa waxaa muddooyinkii u dambeeyay qeybo ka mid ah ku sugnaa dagaalamayaal ka tirsan Shabaab iyo maleeshiyooyin hubeysan, waxayna aheyd magaalo ay qeybna AMISOM ka joogtay, qeyb Maleeshiyooyin hubeysan iyo Al-Shabaab.
Previous articleMuuse Biixi “Somaliland waa is difaaceysaa, kuwa ka soo hanjabaya Xamar iyo Garowe…”
Next articleC/weli Gaas “Shabaab iyo Daacish dalka meelna dhib ayay ku hayaan, meelna xagtin xataa ma gaarsiiyaan”